जीवनशैली « Pariwartan Khabar
गर्भ रहेको कसरी थाहा पाउने?
१९ मंसिर २०७६, काठमाडौं सन्तान जन्माउनका लागि महिला गर्भवती हुन्छिन्। कतिपयः महिलाहरु चाहेर पनि गर्भवती बन्न सकिरहेका हुँदैनन् भने कति महिलाहरु नचाँहदा–नचाँदै पनि गर्भवती बनिरहेका हुन्छन्। यी दुवै अवस्था आउनुमा
गर्भ नबस्नुको कारण जान्नुहोस्….
१९ मंसिर २०७६, काठमाडौं औसतमा जँचाउन आउने २ सय महिलामध्ये दुईजनामा बाँझोपनको समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन्। त्यसमा धेरैजसोजसमा प्रायः जसो एकजनाको गर्भ नरहनुको कारण पुरुषमा रहेको स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने
जाडो महिनामा छालाको हेरविचार यसरी गर्नुहोस्…
१७ मंसिर २०७६, काठमाडौं जाडो महिनामा चिसोले छालालाई बिगार्ने गर्दछ। जाडो महिनामा छाला सुख्खा हुनुका साथै अनुहारको चमक उडेर जाने गर्दछ। जाडो महिनामा छालाको रङ फुङ्ग उडेर जाने र सुख्खा
आइसीयूबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो सन्देश[भिडियो]
१६ मंसिर २०७६, काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सवास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताएका छन्। उनले सोमबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफू मेजर अप्रेसनपछि पनि उठेर बस्न, कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा
सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि के सेक्सको आवश्यक छ?
१६ मंसिर २०७६, काठमाडौं हुन सक्छ तपाईँको सम्बन्धमा यौनसम्पर्क पहिलो प्राथमिकतामा छैन। तर कुनै पनि पाटर्नरबीचको सम्बनधमा सेक्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। कयौं जोडीबीच यौनसम्पर्कका लागि अनुकुलता नहुँदा सम्बन्ध टुट्ने
यसकारण खानुहोस् जाडोमा यी मसला
१६ मंसिर २०७६, काठमाडौं मौसममा परिवर्तन आउँदा र शरिर चिसो हुँदा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन्। चिलो बेलामा शरिरलाई तातो हुने खानपान गर्नुपर्दछ। शरिरलाई भित्रैबाट तातो राख्नका लागि गरम मसला नै
१४ मंसिर २०७६,काठमाडौं करिब रातको १० बजेको समय । काठमाडौँको सडक चकमन्न बन्दै गए पनि शुक्रबारको रात अघिपछिभन्दा सवारीको चाप बढी नै थियो । साना सवारी र मोटरसाइकल कालीमाटी हुँदै
यी हुन् स्याउ खानुका फाइदा, जान्नुस्…
१३ मंसिर २०७६, काठमाडौं नेपाल मात्रै नभएर संसारभर सबैभन्दा बढी खरिद बिक्री हुने फलफूल मध्ये ‘स्याउ’ पनि एक हो। केरापश्चात् यसको किनबेच अधिक हुने गरेको अनुमान रहेको छ। नेपालमा पनि
गाडीमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ? यसो गर्नुहोस्…..
१३ मंसिर २०७६, काठमाडौं यात्राका क्रममा शरिरका इन्द्रीयहरु आँखा, कान इत्यादिले सन्तुलित ढंगबाट आ–आफ्नो कार्य गर्न नसक्दा मोसन सिकनेस अर्थात यात्राजन्य वान्ता उत्पन्न हुन्छ। मोसन सिकनेस पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ।
के रक्सी सेवनले यौन क्षमता र सन्तुष्टि दिन्छ?
१३ मंसिर २०७६, काठमाडौं यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा जानकारी नहुँदा नेपालमा धेरै प्रकारका गलत कुराहरुको चर्चा हुने गरेको छ। यौन स्वास्थ्य भन्नाले शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले यौनिकताका सन्दर्भमा
चिसोबाट बच्चालाई बचाउन यसो गर्नुहोस….
१२ मंसिर २०७६, काठमाडौं जाडो बढेको छ। बिहान–बेलुका निकै चिसो महसुस हुन थालेको छ। चिसो बढेसँगै हरेक मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यको पनि उत्तिकै ख्याल राखनुपर्दछ। जसमध्येमा बालबालिकामा पनि भर्खरका शिशुहरूमा बढी
सुत्केरी महिलाको स्याहार कसरी गर्ने?
१२ मंसिर २०७६, काठमाडौं विशेष गरी बच्चा जन्मेको ६ हप्तासम्मको अवधिलाई सुत्केरी स्याहार भन्ने वुझिन्छ। यो एक परिवारका र एउटी आमाका लागि निकै खुसीको क्षण त हुँदै हो। ९ महिनासम्म